Igwe onyogho WiFi, Microscope Video, Microscope Veterinary - Opto-Edu
A1 onyinye microscope
A11 Nwa akwukwo
12lọ nyocha A12
A13 Igwe Igwe
A15 Na-ekwusi ike
A17 Nlele Anya
A18 Nkọwa Forensic
A19 Usoro Iche
A10 Ọchịchịrị Ọchịchịrị
Mikroskopu A2 Stereo
A22 Nzọụkwụ mbugharị
A23 Continous bia
Mikroskopu A3 Dijitalụ
A31 Digital ndu
A33 LCD Nduzi
A34 USB Dijitalụ
A34 WIFI Dijitalụ
Mikroskopu na-aru oru
A5 Microscope Ngwa
A50 Ngwa mma ndi ozo
A54 Stage, Guzosie, Nosepie
Igwefoto Igwe onyonyo A59
Igwefoto LCD +
Mikroskopu nke A6
T1 teliskop & Binocular
Mini Microscope, Ebube
E12 Okpomọkụ, Ike, Ugbo
E13 Eletriki, Igwe Ọdụdọ
E21 Ngwaọrụ Chemical
E22 Glasslọ nyocha Lab
E24 ụlọ nyocha Plastic
E25 ụlọ nyocha ọkachamara
E26 nzacha & TestPaper
E31 Ngwaọrụ ndu
E32 Modeldị mmadụ
E3A toso & Oke
E3C Skeletal Sistemụ
E3D Brain & Nrụrụ Ọrụ
E3E usoro iku ume
E3F Sistemụ Sistemụ
E3H Urinary & Mmeputakwa
E33 Ihe Nlere Anya
E34 ntdị Osisi
E35 Kwadebere slide
E36 eliedị Enyemaka
E4 Geography, Mbara Igwe
E41 Ngwa Astronomy
E5 -lọ akwụkwọ ọta akara
E51 Mmụta nke -lọ Akwụkwọ
E52 -mụaka Schoollọ Akwụkwọ Niile
E53 DIY Ngwaọrụ
E58 Mmụta Robot
Iji rụkwaa ekwentị mkpanaaka, stereo microscope bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị baa uru. Ugbu a, anyị nwere ọhụrụ ụdị A23.3645N-R usoro na roba na mpe mpe akwa, dijitalụ igwefoto, LCD ihuenyo niile jikọtara maka mfe ọrụ! A36.4952 bụ ike dị ike nke nwere nnukwu ihe ngosi 1080p, mgbatị na-elekwasị anya na ọkụ ọkụ abụọ iji lelee ụdị ebumnuche niile site na oghere mbugharị na ihuenyo!
Microscope inverted, bụ ụdị nke 'inverted' nke microscope na-arụ ọrụ nke ọma, ma isi mmalite ọkụ na condenser guzobere elu karịa ọkwa ahụ wee na-atụ aka na ọkwa ahụ, ebe ebumnobi na ebumnuche ya dị n'okpuru ọkwa ahụ na-egosi, E mepụtara ya na 1850 site n'aka J. Lawrence Smith, ejiri lee mkpụrụ ndụ ma ọ bụ ihe dị ndụ na ala nke efere petri ma ọ bụ nke anụ ahụ. Igwe microscopes nke na-agbanwe agbanwe na mbara igwe nwekwara ike inye ọrụ dị mma, ọdịiche nke oge, ma ọ bụ ọrụ epi fluorescence kwa.
Igwe microscope nke stereo bụ ezigbo ngwaọrụ iji lelee ma chọpụta diamond, ọla, ugbu a, nke nwere ihe ọhụụ LCD dijitalụ ọhụrụ na ọkụ ọkụ ọkụ, A36.3601 na A36.1210 ghọrọ ndị siri ike ma dịkwa mfe maka ndị ahịa anyị, ndị chọrọ ịhụ n'ụzọ doro anya n'ime diamond!
OPTO-EDU (Beijing) Co .. Ltd. ọkachamara na mbupụ nke elu-ọgwụgwụ ngwa anya ngwá na izi ngwá ebe ọ bụ na 2005. Dị ka otu n'ime ndị kasị ọkachamara na ike ngwa anya na izi ngwaahịa mbupụ suppliers na China, anyị lekwasịrị anya na a na ubi n'ihi na ihe karịrị 16 Afọ. OPTO-EDU ka akwadoro iguzobe nchekwa data zuru ezu nke ngwa anya & ihe eji eme ihe na China, nke bu ezigbo onye na-eweputa ihe maka microscope na ihe omumu. Ugbu a, anyị nwere ụdị 5000 + na ndị ọkachamara 500 + na-eweta na usoro ntinye anyị. Site na ngwaahịa nke elementrịrị kachasị na ngwọta kacha mma, anyị na-egbo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche na ahụike, nyocha sayensị, agụmakwụkwọ, ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ dị iche iche kwa ụbọchị.
A16.1095 Full Motorized agbanwe agbanwe Fluorescent Mi ...
A16.1092 nọdụ Fluorescent mikroskopu, LCD T ...
A16.1091 Inverted Fluorescent Microscope, Ọkara ...
A14.1092 Inverted Biological Microscope, LCD Iji ...
A14.1091 nọdụ Laboratory microscope, ọkara A ...
A16.1065 nọdụ Ikanam Fluorescent mikroskopu, B ...
A14.1065 Inverted Biological Phase iche Mic ...
A13.1090 nọdụ Metallurgical Microscope, Sem ...
Usoro 30000+ kachasị microscope anyị nyere na Bangladesh na 2019
Na 2018, ndị ahịa anyị na Bangladesh gwara anyị na ha ga-aga na gọọmentị, maka ihe karịrị 30000+ microscopes, yana akwụkwọ ọrụ gọọmentị. Ihe omumu a bu inye ndi umu akwukwo ihe nchoputa kariri ulo akwukwo 10000 + na obodo Bangladesh, nye umu akwukwo aka na ulo akwukwo na isi ...
Anyị nwere obi ọmịiko na gọọmentị Bolivia maka igwe microscope 1980 na 2019
Na 2019-02, ndị ahịa Opto-Edu si Bolivia gwara anyị site na email na, faịlụ anyị dị nro maka ụdị microscope nke atọ zuru ezu 1980 pcs enwetawo iwu gọọmentị dị nro! Anyị kwesịrị okpukpu abụọ gosipụta nkọwapụta nkọwa niile, ọnụahịa, ọnụ ahịa mbupu na nnyefe oge maka ụdị ndị a ozugbo, yana ihe niile ...
Gaa Leta ma lelee ogo microscope tupu mbupu maka iwu ndị ahịa Denmark na 2019.
Opto-Edu nwere onye ahịa ochie si Denmark ruo ihe karịrị afọ 15, na-enye iwu ihe karịrị ụdị microscope 30 ruo ogologo oge, ire ere karịrị 1000 ruo 1500 PC kwa afọ. Ọbụna iwu ọ bụla adịghị oke, mana ka ọ metụtara ọtụtụ ụdị, onye ahịa nwere ọtụtụ nkọwa chọrọ n'aka mbipụta logo, agba agba, mbukota c ...
Banye iji chọọ, ma ọ bụ Esc iji mechie